Ibsa Suuratu An-Naazi'aat-Kutaa 3 - Ibsaa Jireenyaa
Ibsa Suuratu An-Naazi’aat-Kutaa 3
December 24, 2019 Sammubani Leave a comment
Kutaa dhumaa suuratu An-Naazi’at keessatti waa’ee Guyyaa Qiyaamaa fi wantoota sodaachisoo guyyaa san adeemsifaman ni ilaalla. Qiyaamaa jecha ajaa’ibaa takkaan ibsuun dhugaa ishii ifa baasa. Jechi tunis, “Mursaahaa” Addunyaan garamitti deemaa akka jirtu jecha takkatti tanaan sammuu namaa keessatti fakkii kaasun ibsa. Dhugumatti Qur’aanni kitaaba ajaa’ibaa Rabbii olta’aa irraa malee eenyurraallee ta’uu kan hin dandeenyedha.
“(34)-Yeroo balaan guddoon dhufte, (35)-Guyyaa namni wanta hojjate yaadatu. (36)-Jahiimis nama ilaaluuf ifa baafamte, (37)-Namni daangaa darbee fi (38)-Jireenya addunyaa tanaa filate, (39)-dhugumatti Jahiim teessoo [isaati]. (40)–Namni Gooftaa isaa dura dhaabbachuu sodaatee fi lubbuu ofii waan ishiin hawwitu irraa dhoorge, (41)-dhugumatti Jannani teessoo [isaati].” (suurat An-Naazi’aat 79:34-41)
“Yeroo balaan guddoon dhufte, Guyyaa namni wanta hojjate yaadatu.”
Araboota biratti “Xaammatu” jechuun balaa garmalee ulfaataa hin danda’amnee fi wanta hundaa haguugudha. Jecha “Xaammatu” jedhu wanta baay’ee guddaa fi bishaan baay’eef itti fayyadamu. Yommuu bishaan laga guutu “Xammal maa’u” jedhama. Ingiliffaan jecha Xaammatu jedhu, “Overwhelming Calamity” Amaariffaan immoo “መዐት” jechuun hiikan.
Kanaafu, Qiyaamaa fi wanta ishii keessatti adeemsifamu, “Balaa guddoo waan hundaa haguugdu (Xaammatul Kubraa)” jedhamte waamamuun sirritti kan ishiif maluudha. Yommuu Qiyaamaan guddoon balaan ishii wanta hundaa haguugu dhuftuu fi Guyyaa san keessa namoonni qorannoo fi murtiif dhaabbatan, sharrii fi keeyri irraa wanta addunyaa keessatti hojjate namni hunduu ni yaadata. Wanti kitaaba hojiin isaa itti galmaa’u keessatti barraa’e wanta addunyaa irratti hojjateen walitti kan galu ta’ee argata.
“Jahiimis nama ilaaluuf ifa baafamte,” kana jechuun nama haala ishii ilaalu danda’u hundaaf Guyyaa san Jahiim ni mul’ifamti. Jahiim: maqaa ibiddaati, Jahannam
“Namni daangaa darbee fi Jireenya addunyaa tanaa filate, dhugumatti Jahiim teessoo [isaati].” Kana jechuun namni badii gurguddaa hojjachuun daangaa Rabbiin kaa’e darbee fi Aakhirah guutumatti dhiisee jireenya addunyaa filate, gahuumsi fi iddoon jireenya isaa Jahannami.
Jecha biraatin, namni kafaruun, of tuuluu fi badii gurguddaa hojjachuun daangaa Rabbiin kaa’e darbee fi Aakhirah guutumaan guututti dhiisee jireenya addunyaa tanaa filate, dhugumatti Jahannam iddoo jireenya yeroo hundaa keessa jiraatu fi turuudha. Asitti jireenya addunyaa jechuun qananii fi faaya ishiiti.
“Namni Gooftaa isaa dura dhaabbachuu sodaatee fi lubbuu ofii waan ishiin hawwitu irraa dhoorge, dhugumatti Jannani teessoo [isaati].” Kana jechuun namni qorannoof Rabbiin fuundura dhaabbachuu sodaatee fi wanta badaa nafseen hawwitu irraa dhoowwe, Jannani iddoo jireenya isaati.
Wanti nafseen jaallattuu fi hawwitu baay’eedha. Aaya keessatti “….lubbuu ofii waan ishiin hawwitu irraa dhoorge…” jedhu yommuu dubbisnu, wantoota sammuu keenya keessatti dhufan keessaa gurguddoon, hawwii badaa akka zinaa, hannaa fi kkf. Eeti, wantoonni kunniin aayah tana keessa ni seenu. Garuu wanti kana caalu maal akka ta’e beektu? Wanti kana caalu “shirkii fi of tuuludha.” Nafseen namaa tuni “Of ol guddisuu fi of dinqisiifachuu” jaallatti. Ammas, hojii gaarii namootatti agarsiifachuun ykn dhageessisuun namoonni akka faarsan jaallatti. Hojii gaarii na argaaf hojjachuun riyaa dha miti ree? Riyaan immoo gosa shirkii keessaa tokko. Kanaafu, namni Rabbii isaa fuundura dhaabbachuu sodaatee fi lubbuu ofii of ol guddisuu, of tuuluu, of dinqiisifachuu, kufrii, shirkii, na argaa, zinaa, hanna, namoota irratti daangaa darbuu fi kkf irraa dhoorge, Jannani iddoo jireenya isaa yeroo hundaa keessa turuudha. Akkuma Hadiisa keessatti dhufe, namni of tuulu Jannata hin seenu jedhame jira. Namni of hin tuulle immoo Jannata ni seenaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa ni jedha:
“Ganda Aakhiraa san warra dachii keessatti ol’aantummaa fi badii [raawwachuu] hin feenef goona. Boodden [gaariin] warra Rabbiin sodaataniifi.” Suuratu Al-Qasas 28:83
“Warra dachii keessatti ol’aantummaa… hin feenef” yommuu jedhu, haqa ykn namoota irratti kanneen of hin tuulle jechuudha. Namoonni kunnin gadi of qabu. Haqa irratti of hin tuulan. (Kana jechuun haqni (ergaan Islaamaa) yoo isaanitti dhufe, fudhatanii hordofu.) Dachii keessatti badii raawwachu jechuun immoo dachii ma’asiyaadhaan (ajaja Rabbii faallessu fi Isaaf buluu diduun) balleessudha.”
“(42)-Waa’ee Qiyaamaa ilaalchisee “Geenyi (dhufaatin) ishii yoomi?” [jechuun] si gaafatu. (43)-Ati ishii dubbachuu irraa maal keessa jirtaa? (44)-Dhumti ishii garuma Gooftaa keetiti. (45)-Ati akeekachiisaa nama ishii sodaatuti. (46)-Guyyaa ishii argan akka waan waaree booda yookiin waaree dura malee homaa hin turre [isaanitti fakkaata].” Suuratu An-Naazi’aat 79:42-46
“Waa’ee Qiyaamaa ilaalchisee “Geenyi ishii yoomi?” [jechuun] si gaafatu.”
Aayah keessatti “Mursaahaa?” jechuun maal jechuudhaa? Maxxantuun “-haa” maq-dhaala, “ishii” jedhu bakka bu’a. Amma wanti beeku barbaannu jecha “mursaa” jedhuudha. Jechi “mursaa” jedhuu xumura, “arsaa” jedhu irraa kan horsifameedha. Hiika “Arsaa” keessaa tokko, “Irraa bu’uuf dooni buufata ishii (galaana daarii) geessudha.” Kanaafu, mursaa jechuun, “geenyi, gahiinsi, dhufaati (arrival)” ta’a. Hiikni biraa, “Arsaa” gadi dhaabudha. Hiikni lamaan kunniin Qiyaamaaf kan ta’uudha.
Jechi “Mursaahaa” jedhu “argamuu” Qiyaamaa agarsiisuuf itti fayyadamame. Kanaafu, “Geenyi (dhufaatin) ishii yoomi?” jechuun “Qiyaamaan yoom dhaabbatti? Yookiin yoom argamtii?” Hiikni biraa, “mursaa” galaana daarii iddoo (buufata) dooniin itti dhaabbattuudha. 
Jecha Mursaahaa fayyadamuun dubbii bareechisuuf qofa osoo hin ta’in, wanta barbaachisaa ta’ee wal fakkeessun ibsuu fi haqa Qiyaamaa akka namoonni hubatan taasisuufi.
Yunivarsin erga uumame irraa kaasee tartiiba isaa eeggate yeroo yeroon wal hordofe deemuun doonii galaana irra deemtuun wal fakkaata. Dooniin tuni adeemsa ishii keessatti iddoo adda addaatti jijjiramaa fi sochii haarawa horatti. Wanti samii fi dachii keessa jiraniis socho’uu fi jijjiramu itti fufuu. Sochiin kuni hin dhaabbatu hanga Qiyaamaan dhaabbattutti malee. Dubbii akkanatti ifaa haa goonu: addunyaan dooni galaana keessa deemtun wal fakkaatti. Qiyaamaan immoo iddoo fi yeroo dooniin itti dhaabbattuun wal fakkaatti. Akkuma dooniin galaana bishaanii keessatti sochii itti fuftuun, addunyaan tunis galaana yeroo keessa sochii ishii itti fufti. Fkn, aduun, jiiyni fi urjiileen sochii fi naanna’uu isaanii itti fufu. Doonin erga deemte booda buufata dhumaa itti dhaabbattu qabdi, addunyaan tunis yeroo itti dhaabbattu qabdi. Yeroo kanaan Guyyaa Qiyaamaa jennaan. Kanaafu, akkuma dooniin deemte deemtee buufata ishiitti dhaabbattu, addunyaan tuniis deemte deemtee Qiyaamaa biratti ni dhaabbatti. Yommuu Qiyaamaan dhootu, addunyaan guutuun baduun jireenyi lammataa jalqabama.
“Ati ishii dubbachuu irraa maal keessa jirtaa?” Kana jechuun Yaa Muhammad! Yeroo Qiyaamaan itti dhuftu kan hin beekne taatee osoo jirtuu yeroo Qiyaamaa dubbachuuf wanta akkami keessa jirtaa? Beekumsa ishii irraa ati homaa keessa hin jirtu. Kana jechuun yeroo Qiyaamaan itti dhaabbattu hin beektu.
“Dhumti ishii garuma Gooftaa keetiti.” Kana jechuun beekumsi yeroon adeemsi jireenyaa addunyaa tanaa itti dhumatu fi haala addunyaa tanaa xumuraan gahuuf Qiyaamaan itti dhaabbattu gara Rabbii kee qofaati. Jecha gabaaban, Qiyaamaan yoom akka dhaabbattu Kan beeku Rabbiin qofa. Qur’aana keessatti ni jedha:
“Ati akeekachiisaa nama ishii sodaatuti.” Itti gaafatamummaan kee yeroo Qiyaaman dhaabbattu namootaaf ibsuu miti. Gooftaan kee yeroo kana namoota, Malaykoota fi jinnoota irraa dhoksee jira. Itti-gaafatamummaan kee nama Qiyaamaa fi adabbii Guyyaa san kaafirootaa fi namoota badii gurguddaa hojjataniif qophaa’e sodaatu akeekachiisudha.
“Guyyaa ishii argan akka waan waaree booda yookiin waaree dura malee homaa hin turre [isaanitti fakkaata].”
 Ma’aariju tafakkuri-15/60, Tafsiiru Qurxubii 22/62 Tafsiiru muyassar-584 Sharih Riyaadu saalihin- jildii 3 fuula 539 irra fudhatame. Tafsiiru tahriir wa tanwiir-30/95, Tafsiiru Qurxubii-9/405 Ma’aariju tafakkuri-15/63 Gabaabbinnaan Ma’aariju tafakkuri-5/81 Ma’aariju tafakkuri-15/64, 5/87-88, Tafsiiru Qurxubii-22/67